Zlatan Ibrahimovic oo kulanka soo socda gaari kara rikoodh 91-sano u yiilay Man United…(Muxuu yahay?) – Gool FM
Byare August 24, 2016
(Manchester) 24 Agoosto 2016. Joog dheere Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka sabtida ay Man United la ciyaari doonto Hull City gaari kara ama soo bar-bareyn kara rikoodh Red Devils u yiilay muddo 91-sano ah.
Xiddiga reer Sweden ayaa goolal wada dhaliyay saddexdii kulan ee kulamo rasmi ah uu u saftay Man United tan iyo sidii uu ugu soo biiray Old Trafford, haddii uu gool kale dhaliyo kulanka sabtida wuxuu dabcan soo bar-bareyn doonaa rikoodhkii Jimmy Hanson ee xilli ciyaareedkii 1924-25.
Ibra ayaa shabaqa soo wada taabtay saddexdii kulan ay Man United guulaha ka gaartay Leicester Community Shield, Bournemouth iyo Southampton oo ay la ciyaareen Premier League.
Kulanka soo socda ayay tijaabo adag u noqon doontaa Zlatan maadaama ay Hull City soo adkaatay labadii kulan ay soo ciyaartay Premier League isla markaana laga dhaliyay hal gool oo qura, yeelkeede haddii uu Ibra shabaqa gaaro wuxuu gali doonaa buuga taariikhda ee Man United.
Schweinsteiger oo af cad ku sheegay inay Man United tahay kooxdii ugu dambeysay uu….